Qeybta:Sheekada Saameynta6 min akhris
Hope Lives Halkan: Horumarinta Cusub ee Minnesota
HORUMARINTA HORUMARINTA IYO HORUMARINTA GOOBTA MINNESOTA
Markii Kendra iyo Paul Rasmusson ay ka ganacsanayeen nawaaxiga Minneapolis si ay ugu noqdaan magaalooyinka Kendra ee New Prague, Minnesota, waxay heleen bulsho isku dhafan oo ay kor u qaadi karaan qoyskooda. Waxay jecel yihiin dareenka New Prague dareenkiisa.
Weli, tallaabadoodu waxay u baahan tahay waxoogaa hagaajin ah. Sida jaaliyado badan oo reer miyiga ah, New Prague (pop 7,000) waxay lahayd hal dukaamo oo kaliya. Iibsiga cuntada ugu dhow ee ka fog 20 mayl, meelo laga helo cuntooyinka maxaliga ah sida badeecada dabiiciga ah, hilibka cowska ah, iyo waxyaabaha caanaha laga soo saaro way adag tahay. Baadhitaankooda cuntada caafimaadka leh, cuntada deegaanka ayaa noqday mid degdeg ah markii dhakhtarku gartay gabadooda, kadibna laba sano jir, oo leh suuxdin. Ka dib markay baranayaan in isbeddelka cuntooyinka ay suurtogal tahay in ay gacan ka geystaan xakamaynta qabsashadeeda, lamaanaha ganacsatada ah ayaa la yaabay haddii ay tahay inay bilaabaan suuqa xorta ah ee cuntooyinka xaafaddooda ku yaala isla markaana naftooda ku badbaadi karaan marxuumka toddobaadlaha ah ee wadada safarka ah ee 40 miles.
Qiyaastii $ 252 milyan ayaa lagu maalgeliyay ganacsiyada maxaliga ah ee ku yaalla Woqooyiga Minnesota, taas oo abuurtay in ka badan 46,000 oo shaqo.
Sanadka 2015, Rasmussons waxay dukaankooda ka furteen dhisme taariikhi ah oo ku yaala Main Street ee magaalada New Prague. Markay sameeyeen, suuqa beeraha waxay ku biireen mashaariicda mashruucyada ganacsiga oo dib u furtay in ka badan 30 sano. Qiyaastii $ 252 milyan ayaa lagu maalgeliyay ganacsiyada maxaliga ah ee ku yaalla Woqooyiga Minnesota, taas oo abuurtay in ka badan 46,000 oo shaqo.
Abuuritaanka lix xarun oo madax banaan oo u adeega Minnesota
Sanadkii 1986, Machadka "McKnight Foundation" wuxuu abuuray koox ka mid ah ururada si wax looga qabto dhibaatooyinka dhaqaale ee geystay gobolka. Laga soo bilaabo wakhtigaas, deynta ganacsiga yaryar waxa ay ahaayeen lix geesood Aasaasiyadeedka Minnesota kuwaas oo u adeega gobollo kala duwan oo ku yaalla Greater Minnesota.
Dhamaan xarumaha, xubnaha bulshada waxay ku dabaqayaan mudnaanta iyada oo ku saleysan qiimaha iyo baahida gobolka, haddii ay qaadato qaabka barnaamijyada taageera qoysaska, kobaca hogaaminta, dhismaha beesha, ama horumarinta dhaqaalaha.
"Ugu horreyn, waxaan bilaabay inaan ka fekerno furitaanka dukaanka dhaqameed ee soo saari doona maxaliga iyo wax soo saarka beeraha. Iyadoo lagu saleeyay sahan suuq-gareeyn, waxaan ogaanay inay jiraan baahi, "ayuu yiri Kendra Rasmusson. "Si kastaba ha noqotee, sahanku wuxuu muujiyay in wax ka badan wax kale, dadku waxay doonayeen dukaanka oo la siiyay saacado ku habboon."
Farmhouse Market waa hal tusaale oo ka mid ah waxa suurtagal ah marka caqliga iyo khayraadka midaysan.
Baahida gaarka ah ee beesha ayaa dhiirrigelisay Rasmusson inay dib u qeexaan waayo-aragnimada yaryar ee magaalada yar. Kusoo dhawaatay xarunta 24/7 ee xaafaddaada, lamaanayaashu waxay naqshadeeyeen dukaanka cunto-yada ee is-kaashka ah, xubin walba oo furan saacad furan, oo u furan dadweynaha inta lagu jiro saacadaha la xulay.
In ka badan 200 oo xubnood, Suuqa Markethouse waxay buuxiyaan macaamiisha markii horey u heleen cuntooyinka dabiiciga ah iyo kuwa gudaha ee ay rabaan. Ma aha oo kaliya, laakiin iyada oo la yareeyo kharashyada guud ee loo marayo tiknoolajiyada, Suuq-geynta Farmaajada ayaa ka dhigtay raashinka in uu sii kici karo.
"Waan arki karnaa qaabkan dukaanka ah ee lagu dhexdhexaadiyay beelaha kale ee miyiga ah, oo loogu talagalay baahida bulsho gaar ah," ayuu yiri Kendra Rasmusson. "Halkan, waxay ahayd helitaanka alaabta maxalliga ah iyo kuwa organic. Halka, xitaa, roonaanta waa muhiim. "
Si aad kaaga caawiso inaad dukaanka ka soo qaadato dhulka, Minnesota Foundation Initiative Foundation Rasmussons ayaa ammaah ku siisay Sanduuqa Dhibcaha Cuntada ee Deegaanka. Kendra Rasmusson ayaa ka shaqeeyay mid ka mid ah xirfadlayaasheeda ganacsiga si ay u dejiyaan QuickBooks, taas oo u ogolaanaysa inay maamusho socodka lacagta ee suuqa iyo xiriirka ganacsiga ee iibiyaasha maxalliga ah.
"Kuwa iibiya dukaanka waawayn ee ka fariistay iyo dalbashada cuntada maxaliga ah, tusaale ahaan sida Farmhouse Market ayaa macno weyn u leh ganacsatada cusub ee doonaya inay buuxiyaan baahida kala duwan," ayuu yiri Pam Bishop, madaxweyne ku-xigeenka koonfurta Minnesota Initiative Foundation ee horumarinta dhaqaalaha. "Tani waa nooc ka mid ah hal-abuurka oo muhiim u ah dhaqaalaheena miyiga ah ee hore u sii soconaya."
Shabakada Ganacsatada Weyn ee Ganacsiga
Aasaasiyadeedka Mashruuca Minnesota wuxuu ku kordhay shabakad isweydaarsiyo awood leh oo dhiirigeliya dhibaatada hal-abuurka ah ee wax ka qabashada caqabadaha miyiga ah ee reer miyiga ah.
Muddadii sano ee la soo dhaafay, McKnight wuxuu maal-galiyay in ka badan $ 290 milyan oo ka mid ah xafiisyadii ururadan, waxaana loo isticmaalay $ 270 milyan oo dheeri ah si loo taageero dadaallada dadweynaha ee guud ahaan gobolka.
Farmhouse Market waa hal tusaale oo ka mid ah waxa suurtagal ah marka caqliga iyo khayraadka midaysan. Shirkadaha kale waxaa ka mid ah soo saaraha qaybo yar oo ka shaqeeya Detroit Lakes kuwaas oo shaqeeya in ka badan 1,000 qof oo ku yaalla lixda goobood iyo ganacsiga qoyska ee Pierz oo soo saara saliida gabbaldayaha ah ee cunto karinta, saabuunta, iyo daangada. Shirkadaha software-ka, qalabka dhismaha ee culus, iyo kuwo kale oo ka caawiyay Meelaha Minnesota ee aasaasiga ah ayaa soo saaray tobanaan kun oo shaqo oo si fiican uga bixiya magaalada Greater Minnesota.
Dhamaan dawlad-goboleedyada, xaaladaha gaarka ah ee gobol kasta waxay xoojiyaan xalal cusub oo dhaqaajiya dhaqaalaha maxaliga ah iyo jaaliyadaha.
In Little Falls, Hay'adda Initiative Foundation's Hoggaamiyeyaasha Soo Korayabarnaamijku wuxuu bixiyaa tababar iyo hagid la yiraahdo hoggaamiyeyaasha soo socota, iyaga oo isu diyaarinaya doorarka ka soo jeeda dhaqdhaqaaqyada yaryar si ay u adeegaan bulshada iyo guddiyada aan faa'iido doonka ahayn si kor loogu qaado hoggaaminta kaniisadaha iyo dugsiyada.
Duluth, Northland Foundation's Akhriska Pals Barnaamijku wuxuu isu keenaa akhristayaasha dhallinyarada ah iyo dadka waaweyn ee waaweyn si ay ugu wadaagaan farxadda akhrinta, iyo in la horumariyo hadafka hore ee wax akhriska hore ee caruurnimada.
Bemidji, Foundation Northwest Minnesota's Xiriirinta Bulshada barnaamijka deeqda ah wuxuu taageerayaa hindisaha bulshadu hoggaamiso ee sinaanta sinjiga, oo ay ku jirto deeq loogu talagalay Xarunta Hindida ee Bemidji Area si loo soo celiyo nidaamyada cuntada ee Ojibwe iyo dhaqan dhaqameed.
Hutchinson, Foundation Initiative Foundation's Hayso Koritaanka Barnaamijka wuxuu taageeraa beeraleyda qoyska ee ganacsigooda ku haya dhul kiro ah oo la aasaasay. Ilaa hadda, 1,650 hektar oo dhul beereed ah ayaa lagu deeqay, waxaana in ka badan daraasado barnaamijyo isku mid ah ay ka bilowdeen dalka Mareykanka.
In Fergus Falls, Xarunta Dhexe ee Galbeedka's Maalinta Hero waa mid ka mid ah mashaariic dhowr ah oo ay ku jiraan isbahaysiyada ilmanimada hore si loo hagaajiyo amniga carruurta iyo in ay ka caawiyaan sidii ay ugu kori lahaayeen dad waaweyn, caafimaad qaba, bulsho maskax leh.
Ballan-qaadkan lagu doonayo in lagu maalgaliyo fikradaha ku yaalla Woqooyiga Minnesota wuxuu ubaahan karaa dadka sida Rasmusson ah inay ku horumariyaan bulshooyinkooda.
Maanta, Kendra Rasmusson waxay ka heshaa dalab ka yimaada waddanka oo muujinaya danaha lagu soo rogayo qaabka Farmhouse Market. Waxay ka fekereysaa inay qoro buug ama e-buug-ku-qabasho, ayna qorsheeyneyso in ay ballaariso adeegyadooda si ay u siiyaan dhalinta da'da ah ee maxalliga ah. Iyada oo taageerada McKnight, fikradaha waaweyn kama joojin doonaan New Prague. Taa baddalkeeda, waxay leeyihiin awood ay ku xakameyn karaan gobolka oo dhan iyo wixii ka baxsan.
Mawduuca: Aasaasiyadeedka Minnesota
Kobcinta Noocyada soo socda ee beeralayda